Ngenxa yokuthi umkhiqizo ungakhuphula kakhulu umkhiqizo, ungakhuphula ukuguquguquka komenzi ngokungeza nokunciphisa osonkontileka.
1.Ingabe unayo i-ejenti ezweni lakithi?
Siyakwamukela ukuze uqinisekise izwe ngalinye
2.Iyini i-MOQ yakho?
1 pcs iyatholakala.
3.Ikuphi imboni yakho?
Isifundazwe saseGuangdong, eChina
I-1.I-inventory enkulu, isikhathi esifushane sokulethwa
2.Besilokhu silandela imithetho yokumiswa kwenqubo yokukhiqiza eqinile, ukonga isikhathi nezindleko zazo zombili izinhlangothi futhi sikulethela izinzuzo ezinkulu.
3.Sihlinzeka ngemiklamo ye-3D yobunjiniyela ngephrinta ye-3D ukuhlangabezana nemibono yakho.
4.10000 ㎡ ishabhu nehhovisi, izinduku ezingaphezu kwe-100
I-Guangdong Shenjiang Intelligent Technology Co., Ltd ingumkhiqizi ochwepheshe wemishini yezezimali yasebhange, etholakala e-Guangdong, eChina. Sigxila emshinini wediphozithi yemali, umshini wokuhlunga imali yemali ebhalwe phansi kanye nezingxenye ze-ATM. Siphethe i-R&D amaqembu azungeze izinti ezingama-30 zomshini wediphozithi ye-CDM Cash, umshini wokuhlunga imali, umshini wokubala imali, Umshini we-ATM Nezingxenye, i-pos terminal, njll. Siphethe I-Identification kanye nesipiliyoni somgunyathi sezinhlobo zemali ezingaphezu kwe-100; Ngaphandle kwalokho, izinkampani ezingaphansi kwethu zisebenzisa imishini ye-ATM kanye nezinsiza ze-ATM. singabahlinzeki abahamba phambili bezingxenye ze-ATM, futhi manje siye sanweba ibhizinisi lethu, senza ngendlela oyifisayo umshini wokufaka imali kanye neminye imikhiqizo njengophawu oluthi “Shenjiang”. Samukela i-OEM noma i-ODM, izokuhambisa kuyo yonke inqubo yokudala isixazululo, kusukela ekuxhumaneni ngaphambi kokuthengisa, ukuklama, ukukhiqiza, ukuthunyelwa kuya ekufakweni. Ukukunikeza izixazululo zokuphatha ukheshi ezichwepheshile umuntu ngamunye, Yehlisa izindleko futhi wandise izinzuzo kumakhasimende, kuyilapho uhlinzeka ngesevisi esebenza kahle nenesibopho emva kokuthengisa. Ezamabhizinisi: Khonza amakhasimende ngobuqotho futhi uzuze wena ngekhwalithi Isiqubulo senkampani: ukuqamba, ubuqotho, uthando, ukubambisana. Izindinganiso zebhizinisi: Khonza wonke amakhasimende kahle, wenze wonke umsebenzi abe yimpumelelo Umgomo: Iba umholi wemakethe yomhlaba wonke emshinini wokufaka imali kanye nezixazululo zezezimali zomshini.